Iingcamango ezili-15 zeBlue Kitchen Design - Iindonga zeBlue Kitchen - Amakhitshi Amangalisayo
Ukuphila Ngeendlela Ezahlukeneyo
Iingcamango ezili-15 zeBlue Kitchen Design - Iindonga zeBlue Kitchen
Ngokunyanisekileyo kweBright Bazaar
Emva kokuba mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka yenye yezona zinto zithandwayo kwimibala yasekhitshini. Yinto yeklasikhi, ukuthomalalisa, kwaye yongeza umbala ngaphandle kokuziva ebusweni bakho. Nokuba yi ubuyela umva okanye iikhabhathi , sinezimvo ezininzi malunga nokongeza iblue kwikiti yakho.
Jonga igalari 18Iifoto Ngokunyanisekileyo kukaDavid Tsay ngo-Emily Henderson Designs 1Kaninzi '18Yiza nepati kumgangatho wakho
Iikhabhathi zakho akufuneki zibe nolonwabo. Phuma uphume ngomgangatho onesibindi, kunye neblue.
Bona ngakumbi kwi UEmily Henderson .
Ngokunyanisekileyo kweBright Bazaar MbiniKaninzi '18Uluhlu kwi-Beachy Blues
Le ndlu yaselunxwemeni iyahluka ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka ngobukhulu obungaphezulu. Ukukhanya kwesitayile semizi-mveliso kuyinika imvakalelo yanamhlanje.
Bona ngakumbi kwi Bhaza iBazaar .
Ngokunyanisekileyo kukaNicole Franzen 3Kaninzi '18Hlanganisa uBlue neGrey
Ukuba umahluko uziva ucace phakathi komhlophe noblowu, khetha ngwevu. Iithowuni ezipholileyo zenza indawo emnandi, ephumlayo ukubhaka.
Imiboniso ka-bob ross
Bona ngakumbi kwi UNicole Franzen .
Ngokunyanisekileyo kweTessa Neustadt 4Kaninzi '18I-Akhawunti emnyama
Ezi khabhathi ziluhlaza kunye noluhlu olumnyama mhlawumbi yeyona combo inesini esakha sabonwa. Iimpawu zobhedu zithatha ngokupheleleyo ngaphezulu.
Bona ngakumbi kwi Amber Interiors .
Ngokunyanisekileyo kwe-Veneer Designs 5Kaninzi '18Yigcine ngokufihlakeleyo
Ngubani othi luhlaza okwesibhakabhaka kufuneka alingane ngokuqinileyo? Iiblue blues zinokunceda ukuvala umsantsa phakathi kokufuna ukuhlala ungathathi cala kwaye kwangaxeshanye ufuna ukudlala ngombala.
Iimbono zeveranda zangaphambili zeveranda
Bona ngakumbi kwi Uyilo lweVeneer .
UNancy Nolan 6Kaninzi '18Yiya kupholisa ngeCerulean
Kungakhathaliseki ukuba uhlala phi, lo mthunzi ohlaza okwesibhakabhaka uya kukuhambisa ngqo kunxweme. Kuba esi sithuba sivuleka kwigumbi losapho, basebenzise umbala kuyo yonke into-ukusuka kwisiqithi ukuya kwipaneli yefriji-ukunceda konke kuphele.
UTrevor Tondro 7Kaninzi '18Khetha For Stainless
Intsimbi engenasici idlala ngokungacacanga kakuhle kwikhabhathi eblue. Ifriji engaphantsi kweZero kunye nekhitshi lokudibanisa i-KitchenAid, ngelixa i-GE Profile cooktop idibanisa ngqo kwi-countertop.
UFrancesco Lagnese 8Kaninzi '18Sebenzisa iShelving evulekileyo
Iincindi ezincinci kunye needges zibonisa iiceramics kwaye ziqhekeza iikhabhathi kwikhaya leLake Michigan. Imihlobiso eluhlaza okwesibhakabhaka yeglasi ye-mercury evela kwi-backsplash eluhlaza okwesibhakabhaka, ngwevu, nomhlophe.
UFrancesco Lagnese 9Kaninzi '18Zama ezinye iindlela ezifihlakeleyo
Xa uhlahlo-lwabiwo mali lungavumeli ikhitshi elinamaplanga, beza nelinye iqhinga lendawo ethambileyo: imitya. USherwin-Williams Ukukhangela iingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka iikhabhathi, ngelixa iindonga zisebenzisa umbala ofanayo oxutywe neepesenti ezingama-50 kunye neepesenti ezingama-150 mnyama.
UAmy Neunsinger 10Kaninzi '18Yiya eVibrant ngeColbalt
I-Cobalt yindlela emnandi yokucacisa yonke ikhitshi emhlophe. Izitulo zeBistro zinyukela kwisiqithi esikhanyayo, ngelixa imigca enemigca kunye nomthunzi waseRoma zongeza iipopu zepateni.
izisombululo zokugcina amagumbi amancinci
UTara Striano Shumi elinanyeKaninzi '18Cinga ngeTile yeScalloped
Ipateni yesikali seentlanzi ilungele indlu ngaselwandle. Ingaphakathi leelanteni kule ndawo yokupheka yaseFlorida inempawu ezifanayo.
UTrevor Tondro 12Kaninzi '18Beka iipateni ezithile kwi
Eli khitshi lizisa lonke oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nepateni kwii-banquette zeetafile kunye nezitulo zebistro. Kuyanceda ukuyigcina ekubeni uzive ulunge kakhulu.
UTrevor Tondro 13Kaninzi '18Peyinta isilingi sakho
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka eluphahleni uthambisa uluhlu lweenyawo ezi-5 zeThermador ukuze ingoyisi ikhitshi. Ukugqitywa kokuqaqamba okuphezulu kunye nombala odonsa amehlo kwenza ukuba igumbi lizive lide.
UPaul Costello 14Kaninzi '18Zama iBackplash eBlue
Kuba igumbi lokuhlala likhangele kule khitshi laseFlorida, iithayile eziluhlaza okwesibhakabhaka zaseMoroccan ziyayiphilisa. Isikhumba esidayiweyo ngesandla shibori kwizitora songeza enye into efihlakeleyo yombala.
phantsi kwekhabethe ekhabhathini
UJames Merrell Shumi elinantlanuKaninzi '18Yiya ku-Nautical-Inspired
IJute iglasi tile inqwala elwandle ngaphandle kwetyotyombe labalobi laseMassachusetts. Bade bafakela i-porthole eyiyo yokwenyani yokuziva ngathi igalali.
UTria Giovan 16Kaninzi '18Flash emva kunye nezixhobo zeRetro
UKUYA umxube we-KitchenAid otyheli isebenza njengeelekese encinci yamehlo kwaye uzalisa umgangatho ekhitshini enemibala. Ngasentla kwesi siqithi, 'izibane zase-Italiyane zexesha lama-60s zaxhoma kwisilingi.
UTara Striano 17Kaninzi '18Yongeza ubungakanani obufihlakeleyo ngebhodi yebhodi
Silapha ngenxa yeekhabhathi zasemanzini ezindala kule ndlu yaseSouthampton, eNew York. Ngaphandle kwendlu yokupheka kunye ne-microwave, ibhloko yombala ibonakala phakathi kwebhedi yebhodi.
UTara Donne 18Kaninzi '18Hlanganisa kwezinye iiAccents eziKhanyayo
Ngaba ujonge ukwenza oluhlaza okwesibhakabhaka ngendlela efihlakeleyo? Iithayile zentsimi yeSilver La Leaf Antique Gloss evela Ithayile yobugcisa Nika ukukhanya okukhulu kunye nombala wombala kwikhitshi laseManhattan.
OkulandelayoIindlela ezili-10 zekhitshi ekufuneka uyazi ngo-2018 Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUSienna Livermore Umhleli woRhwebo USienna Livermore ngumhleli wezorhwebo kwi-Hearst egubungela iimveliso ezithengisa kakhulu, izinto zasekhaya, ifashoni, ubuhle, kunye nezinto ongenakuphila ngaphandle kwazo.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Tv Kunye Nefilimu
Ndingumntu oDumileyo 2020 Indawo: Gwrych castle kunye neegadi
Eyona mibala yePeyinti yokuThengisa kakhulu-Iingcebiso zoYilo- Ingcebiso
Ipropathi Mzalwana uJonathan Scott Ufuna i-Soulmate yakhe, kwaye kufuneka azithande izinja
Ikhaya likaPippi Longstocking likwiNtengiso eFlorida nge- $ 750k
Indawo yaseVeverly Hills yangaphambili yeVanna White ikwiNtengiso ye $ 38 yezigidi
I-14 yeeShades eziLungileyo zaMthubi-Imibala ePeyinti ePhezulu ePhuzi
Iingcamango ezili-16 zeeKhitshi zeSiqithi seKhitshi - iikhikhini ngaphandle kweziqithi
Umbuzo woMntu woMbala-ukuhombisa umbala
Iitheyibhile ezingama-33 zeKhitshi eziGqwesileyo- Izimvo zale mihla zeeTafile zasekhitshini
IBill Bill Gates uJenny Craig Horse Ranch- iBill Gates Horse Farm
Ukutyelela ikhaya leNtaba elenziwe nguMax Humphrey
UTarek El Moussa utyhila ukuba kukho iziQendu ezingafakwanga 'eziQhekeza i-101'
Izipho ezingama-40 zoSuku lweValentine yoSuku lweZipho-iZipho zaBantu bonke
ucingo lwecriss cross wood
Imibala emininzi yekrisimesi
izimvo eziqhelekileyo kwigumbi lokuhlala